ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အခုအခါမှာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ သင့်မသင့် (မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေး)
၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို အခုအခါမှာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ သင့်မသင့် (မြန်မာ့အရေး ကမ္ဘာ့အရေး)
မြန်မာတွေရဲ့ တော်ယုံစိတ်အနာတွေဆိုရင် မေ့လွယ်၊ ပျောက်လွယ် ခွင့်လွှတ်လွယ်တဲ့ စိတ်ရင်းခံကို သိထားတဲ့ လူသတ်ဗိုလ်တွေ..
မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူကိုသတ်တဲ့ ဗိုလ်လုပ်ရတာ စားသာပါတယ်။ အမိန့်ကြောင့်ဆိုတဲ့ ခိုင်လုံမှုမရှိ သုံးစားမရတဲ့ဟာကြီးကို ဘေးချိတ်ပြီး အမှားကို အမြန်ဆုံးဝန်ခံလိုက်သင့်ပြီ...။
သူတို့ မလုပ်ချင်တဲ့ ဟာတွေဆိုရင် ဘယ်လိုပဲ အထက်ကအမိန့်ပေးပေး လက်တစ်လုံးခြား ၀ိနည်းလွတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ တူမတူအောင် ထူးချွန်ကြပါလျက် ပြည်သူကို သတ်ဖို့အရေးမှာတော့ တက်ကြွအမိန့်လိုက်နာကြသူတွေ.. အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦးတည်နေတဲ့ ဒီအချိန်ဟာ ၀န်ခံတောင်းပန်လိုက်ဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်တယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး.. ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးမှာ ဆင်းရဲကြပ်တည်း မွဲတေလွန်းလို့.. ထွက်ပေါက်ပိတ်နေလွန်းလို့.. လမ်းပေါ်ရောက်ဆန္ဒပြကြရတဲ့ ပြည်သူတွေကို နောက်ကွယ်က လှုံ့ဆော်လို့ပစ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ကြံဖွံ့ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းစိုးမင်း လူစိတ်ရှိပုံမရပါဘူး။
ပြည်သူကို ရန်သူလို့ မြင်တဲ့အမိန့်ပေးသူ၊ စေခိုင်းသူ၊ လိုက်နာသူတွေကရော အသိတရား ပုံမှန်ရှိကြရဲ့လား။
အသတ်ခံရသူက မြန်မာ၊ သတ်သူကမြန်မာ မြန်မာခြင်းတောင်မှ လက်နက်ရှိနဲ့ လက်နက်မဲ့.. မြန်မာအခြင်းခြင်းမှာမှ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူကို လက်နက်ရှိ စစ်သားက တာဝန်အရ၊ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ရက်ရက်စက်စက် မြိန်ရည်ယှက်ရည် ပစ်သတ်တာမျိုးကို နောင်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပြောဆိုတာမျိုး မလုပ်ပဲနဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ကြီးကို မှန်ကန်သယောင် ပြောသွားတဲ့ ဦးစိုးမင်းဟာ တော်တော်ရွံစရာကောင်းတဲ့ လူ့ငနွားလို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပြည်သူတွေက ဘယ်လောက်ပဲ နာကျည်းကျည်း အမှန်တကယ် တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင် အတိတ်က အမှားတွေအတွက် ခွင့်လွှတ်ချင်နေကြတာပါ။ ၀န်ခံတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ဦးအောင်ထူးကို အရင်ဖတ်ရသမျှ အကုန် မထောက်ခံပေမယ့် ဒီအင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားတာတွေကတော့ ချက်ကြလက်ကြရှိလို့ အမှန်တရားတွေမို့ သဘောကျမိပါတယ်။
James Smitt said...
First, develop the Democracy. This is priority.
Correct the 2008 constitution.
Later, take action who did wrong in the past OR "forget and forgive". Its your choice.
Or you can start taking action and goint to loose Democracy again!
Its depend on people choice, not yours!
ဒေါ်စု ပြောသွားခဲ.တာရှိတယ် ။
.... ဒါကပြည်သူလူထု ရဲ.သဘောဆန္ဒ အတိုင်း
ပြီး၇င် အဲဒီ ကျား ကို ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့အရင် သတ်ပြစ်လိုက်ရင် နွားတွေအကုန်လွှတ်လပ်သွားမယ်၊အဆွဲခံ၇မှာကြောက်စ၇ာမလိုတော့ဘှုး၊တသက်လုံး၊တဘ၀လုံး။
အမိန့်ပေးမှာမဟုတ်သလိုအခိုင်းခံရရင်လည်းလုပ်မှာမဟုတ်၊ တပ်ကထွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်၊
ကျနော်အကိုအကြီးဆုံး ဗိုလ်ကြီး ငှက်ဖျားနဲ့
အထက်လူကြီးကသေချာဆေးမကုပေးပဲပစ်ထားခံလိုက်ရလို့ဦးနောက်ထဲအထိပိုးဝင်ပြီးအခုထက်ထိလူသာမန်မဟုတ်တော့ပါ မိသားစုကပဲ သေတဲ့အထိ ကြည့်ရပါတော့မယ်။အောက်ခြေစစ်သား